EEG KARTUUNKA MAANTA: Miyuu xalay cabsaday Cristiano Ronaldo? – Gool FM
EEG KARTUUNKA MAANTA: Miyuu xalay cabsaday Cristiano Ronaldo?
(France) 15 Juunyo 2016. Kabtanka xulka Portugal ayaan xalay saameyn badan ku lahayn ciyaartii uu xulkiisa Portugal la yeeshay xulka Iceland oo markoodii ugu horreysay taariikhda yimid Euro.
Ninka xooga badan ee reer Iceland ee aktarka ka ah musalsalka Game of Thrones ayaa usbuucii hore ku kaftamay inuu madaxa ka bur-burin doono Cristiano Ronaldo haddii uu xulkiisa gool ka dhaliyo kulankooda furitaanka Euro 2016 ee xalay la ciyaaray.
Hafthor Bjornsso ayaa noqday ninka labaad ee ugu xooga badan tartankii xoog waynayaasha adduunka ee 2014.
Haddaba farshaxamiistaha warsidaha Goal.com ayaa qallinka u qaatay isla markaana KARTUUN maad leh ka sameeyay Ronaldo oo ka cabsaday cago jugleyntii kaga timid xoog waynaha reer Iceland sidaa darteedna saameyn badan u yeelan waayay xalay.
TOOS u daawo: Russia vs Slovakia - LIVE (Ruushka oo halis ugu jira in tartanka laga raacdeeyo haddii...)
Sky Sports waxa ay fahansan tahay in Ibrahimovic heshiis shaqsiyadeed la gaaray Manchester United....Laakiin ficilkan ay ku dhaqaaqi doonto Sweden kama farxin doono Mourinho iyo jamaahiirta Old Trafford